Monday, 22 April 2013 11:01	नागरिक
विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, वैशाख ९ - नेपाल सुनचााँदी व्यवसायी महासंघले आइतबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलाको ५० हजार ५ सय निर्धारण गर्यो । यसले भाउ तोकेलगत्तै अर्को व्यवसायीको संस्था नेपाल सुनचाँदी, रत्न तथा आभूषण महासंघले सुनको भाउ तोलामा १ सय रुपैयाँ घटाएर ५० हजार ४ सय रुपैयाँ तोक्यो।
सुनचाँदी व्यवसायीका यी दुइटा महासंघले यसरी जुहारी खेल्न थालेको दुई वर्ष हुन लागिसक्यो। दुई महासंघले एक-अर्काको अविश्वास गर्दै कहिले बढी र कहिले घटी भाउ तोक्दै आएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय भाउ हेर्दै त्यसका आधारम तत्काल मूल्य निर्धारण गरेर सुनचाँदी बिक्री गर्ने परिपाटी नेपालमा छैन। यसको फाइदा उठाउँदै नेपाली व्यवसायीले फरक-फरक मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्ता अन्योलमा पर्ने गरेका छन्।
छिमेकी मुलुक भारतका मुम्बई र दिल्लीलगायत सहरसहित विश्वका विकसित मुलुकमा सुनको भाउ छिन्छिन्मा निर्धारण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भाउ हेरेर तत्काल मोल तलमाथि गरेर व्यापारीले कारोबार गरिरहेका हुन्छन्। यसका लागि इन्टरनेटसहितका विभिन्न पूर्वाधार आवश्यक पर्छ।
नेपालमा यस्ता पूर्वाधार विकास नभइसकेकाले वषर्ौंदेखि व्यवसायीले भाउ प्रत्येक दिनको भाउ निर्धारण गर्दै आएका छन्। बिहान ११ बजे तोकिएको भाउ अर्को दिन बिहान ११ बजेसम्म कायम रहने परम्परा छ। भाउमा निकै वृद्धि वा ह्रास भए भने दिनमा दुई पटकसम्म भाउ निर्धारण भएको इतिहास छ। तर, पछिल्ला दुई वर्षमा यी महासंघले भाउमा गरेको झगडाले उपभोक्तालाई अन्योल सिर्जना गरिरहेको छ।
भाउ तोक्ने कुनै वैज्ञानिक आधार नभएको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले दुईथरी मूल्य निर्धारण गरेका हुन्। 'हामीले सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकै भाउ मान्नुपर्छ भन्ने छैन,' नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले भने, 'हाम्रो महासंघले आफ्नो ढंगले भाउ तोक्छ।'
सरकारले आयातमा कडाइ गरेपछि सुन अभाव हुँदा व्यवसायीबीच विवाद सिर्जना भएको थियो। विवादपछि फुटेर छुट्टाछुट्टै संस्था बनाएका उनीहरुले भाउ पनि फरक तोक्दै आएका छन्। एकैदिन एउटै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई आधार मानेर एकै समय तोकिने मूल्य फरक पर्दा उपभोक्तालाई अन्योल सिर्जना भएको हो।
'हामीसँगको जुगाको लडाइँ गरेर अर्को संघले सय-पचास कम गर्दै भाउ तोक्ने गरेको छ,' नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले भने, 'यस्तो नगरांै भनेको सकिएको छैन।' महर्जनले भने सुनको दोहोरो मूल्य निर्धारण अन्त्य गर्नलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारी समेत सम्मिलित एउटा स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण समिति बनाउनु पर्ने माग गर्छन्।
नेपाली व्यवसायीले अमेरिकी कमोडिटी एक्सचेन्ज कोमेक्सको मूल्यका आधारमा भाउ तय गर्छन्। कोमेक्समा बिहान ११ बजे कायम भएको भाउलाई आधार मूल्य मान्दै नेपालीले सुनको भाउ तोक्छन्।
कोमेक्सको मूल्यलाई आधार मान्दै तोकिने भाउलाई नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले पहिले फ्याक्स गरेर जिल्ला-जिल्ला संघहरुमा पठाउने गर्थ्यो। अहिले भने एसएमएसमार्फत आफ्ना सदस्यलाई जानकारी दिने गरेको छ। यसैगरी नेपाल सुनचाँदी, रत्न तथा आभूषण महासंघले पनि अहिले मूल्य निर्धारण गरेर आफ्ना सदस्यलाई जानकारी दिने गरेको छ।
उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न दिनुपर्ने गहना व्यवसायीको माग
सुनचाँदी व्यवसायीहरुले गहना निर्यातका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार दिन माग गरेका छन्।
सुनचाँदी, हिरा, जवाहारातलगायत गहनाको गुणस्तरबारे व्यवसायीलाई सबैभन्दा धेरै ज्ञान हुने भएकाले प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी अन्य व्यावसायिक संस्थालाई जस्तै महासंघलाई पनि यस्तो अधिकार दिन माग गरेको हो। कुनै पनि सामान निर्यात गर्नलाई यस्तो प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ।
'अरु संस्थाले जस्तै हाम्रो संस्थाले पनि गहना निर्यातका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउनुपर्छ,' महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले भने, 'अरुले गर्न पाउँछन् भने हामीले गहनाको मात्र गर्न किन नपाउने?' पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले आफ्नो प्रथम साधारणसभाबाट पारित काठमाडौं घोषणपत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ।
महसंघले सार्वजनिक गरेको १३ बुँदे घोषणापत्रमा सुनको सहज ढंगले आपूर्ति गर्न माग गरिएको छ। महासंघले बजारको माग र आपूर्तिको अध्ययन गरी त्यसका आधारमा सुन आपूर्ति हुनेपर्ने माग गरेको छ।
सुनचाँदी र गरगहनाबारे अनुगमन गर्न तत्काल अनुगमन नियमावली, नीति र कार्यविधि बनाउनुपर्ने, निर्यात सहज बनाउनुपर्ने, स्वदेशी बहुमूल्य पत्थरको उत्खनन् हुनुपर्ने, मूल्य निर्धारणका लागि वैज्ञानिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गहना मेला गर्न सरकारी सहयोग हुनुपर्नेलगायत माग घोषणापत्रमा गरिएको छ।
यसैगरी महासंघले सुनचाँदी रत्न आभूषण औद्योगिक प्रवर्द्धन क्षेत्र विकास गर्नुपर्ने, सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, सुनचाँदी व्यवसायीको सुरक्षा दिनुपर्ने, तत्काल निर्वाचन घोषणा हुनुपर्नेलगायत माग गरेको छ। महासंघको प्रथम साधारणसभाले रमेश महर्जनको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ।
सप्तरीमा सुनको भाउ अझै ५२ हजार ४ सय (2013-04-18)
पाइपमा पानी हैन पेट्रोल ! (2013-04-17)
कच्चा तेलको भाउ घट्यो (2013-04-17)
करोड लगानीमा फेन्सी स्टोर्स (2013-04-04)
सहमतिपछि तेल ढुवानी सुचारु (2013-04-03)
आदेश खारेज नभए चैत २५ देखि अनिश्चितकालिन ढुवानी ठप्प (2013-04-01)
घिउ र तेलमा यसरी भइरहेको छ ठगी (2013-03-28)
३ वटा संघले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी दिए (2013-03-24)
तेल बक्यौता सबै चुक्ता (2013-03-24)
आयल निगमका निमित्त कार्यकारी फेरिए (2013-03-21)